Sadex qof oo Al-Shabaab lala xiriirnayo oo Muqdisho lagu soo bandhigay – Radio Daljir
Sadex qof oo Al-Shabaab lala xiriirnayo oo Muqdisho lagu soo bandhigay
Oktoobar 23, 2012 7:05 b 0
Muqdisho, Oct 23- Saraakiisha ciidamada dambi baarista dowladda faderaalka ee Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho kusoo bandhigay sadex qof oo lagu eedaynayo inay katirsanyihiin Al-Shabaab.
Hogaanka sare ee laanta dambi baarista ahna afhayeenka ciidamada booliska Col. Cabdilaahi Xasan Bariise ayaa saxaafadda ugu soo bandhigay magaalada Muqdisho eedaysnaayasha oo mid ka mid ah haweeney ay tahay.
?Waxaa hortiina fadhiya eedeysane Ilyaas Aadan Xasan oo 35 jira ah, ku dhashay Waajid, wuxuu ka mid ahaa Alshabaab, wuxuu Baydhabo ku dilay 2 sakari oo booliska ah iyo qof rayid ah, markuu dilay ayuu shir jar?aaid ku kor qabtay? ayuu yiri Col. Cabdilahi Xasan Barriise.
?Waxaa kale oo halkaan ku xiran Max?ed C/qaadir Xasan, 19-kii bishaan aan ku jirno ayuu dil ka geystay Bakaaraha, waana la soo qabtay, waxaa kale oo jira gabar la yiraahdo Yurub Cusmaan Cabdi waxey ka mid tahay Alshabaab, ninkii hore u qabi jiray wuxuu ahaa ninkii ugu dambeeyey ee isku qarxiyey iridka madaxtooyada, iyadana muddo ayaan daba joognay waana soo qabanay? ayuu sidoo kale yiri Col. Bariise.
Hay’adaha nabad sugidda iyo dambi baarista ee dowladda faderaalka ayaa horay marar badan magaalada Muqdisho kusoo bandhigay xubno lala xiriirinayo Al-Shabaab oo ay kusoo qabqabteen howlgallo ay ka sameeyeen magaalada Muqdisho.
Wariye Axmed Faarax Saakin oo maanta lagu aasay qabuuraha Laascaanood.
Wafti QM katirsan oo balanqaaday dardar galinta shaqooyinka isbitaalka guud ee Kismaayo